GrexitCoin စျေး - အွန်လိုင်း GREXIT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို GrexitCoin (GREXIT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ GrexitCoin (GREXIT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ GrexitCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
GREXIT – GrexitCoin
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ GrexitCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
GrexitCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
GrexitCoinGREXIT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00246GrexitCoinGREXIT သို့ ယူရိုEUR€0.00208GrexitCoinGREXIT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00188GrexitCoinGREXIT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00224GrexitCoinGREXIT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0219GrexitCoinGREXIT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0155GrexitCoinGREXIT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0542GrexitCoinGREXIT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00914GrexitCoinGREXIT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00325GrexitCoinGREXIT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00343GrexitCoinGREXIT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0549GrexitCoinGREXIT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0191GrexitCoinGREXIT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0134GrexitCoinGREXIT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.184GrexitCoinGREXIT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.414GrexitCoinGREXIT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00337GrexitCoinGREXIT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00375GrexitCoinGREXIT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0764GrexitCoinGREXIT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0171GrexitCoinGREXIT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.263GrexitCoinGREXIT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩2.91GrexitCoinGREXIT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.946GrexitCoinGREXIT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.181GrexitCoinGREXIT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0677
GrexitCoinGREXIT သို့ BitcoinBTC0.0000002 GrexitCoinGREXIT သို့ EthereumETH0.000006 GrexitCoinGREXIT သို့ LitecoinLTC0.00005 GrexitCoinGREXIT သို့ DigitalCashDASH0.00003 GrexitCoinGREXIT သို့ MoneroXMR0.00003 GrexitCoinGREXIT သို့ NxtNXT0.192 GrexitCoinGREXIT သို့ Ethereum ClassicETC0.000363 GrexitCoinGREXIT သို့ DogecoinDOGE0.71 GrexitCoinGREXIT သို့ ZCashZEC0.00003 GrexitCoinGREXIT သို့ BitsharesBTS0.0758 GrexitCoinGREXIT သို့ DigiByteDGB0.0787 GrexitCoinGREXIT သို့ RippleXRP0.00874 GrexitCoinGREXIT သို့ BitcoinDarkBTCD0.00008 GrexitCoinGREXIT သို့ PeerCoinPPC0.00816 GrexitCoinGREXIT သို့ CraigsCoinCRAIG1.12 GrexitCoinGREXIT သို့ BitstakeXBS0.105 GrexitCoinGREXIT သို့ PayCoinXPY0.043 GrexitCoinGREXIT သို့ ProsperCoinPRC0.309 GrexitCoinGREXIT သို့ YbCoinYBC0.000001 GrexitCoinGREXIT သို့ DarkKushDANK0.79 GrexitCoinGREXIT သို့ GiveCoinGIVE5.33 GrexitCoinGREXIT သို့ KoboCoinKOBO0.561 GrexitCoinGREXIT သို့ DarkTokenDT0.00227 GrexitCoinGREXIT သို့ CETUS CoinCETI7.11